PSJTV | अलमलमा बक्स अफिस, बक्स एकातिर अफिस अर्कैतिर !
अलमलमा बक्स अफिस, बक्स एकातिर अफिस अर्कैतिर !
शनिबार, ०१ मङि्सर २०७५ पिएसजे न्युज
काठमाडौंँ, १ मंसिर ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयदेखि ‘बक्स अफिस’को विषयले चर्चा बटुलेको थियो । तर, बक्स अफिस लागू भएको चार महिना पुगिसक्दा पनि अलमल कायमै छ । चलचित्र निर्माताहरू खुसी छैनन् भने चलचित्र विकास बोर्डले पनि त्यस विषयमा नियमित जानकारी दिन सकेको छैन । के कति सङ्कलन भएको छ भन्ने राम्रोसँग हेर्न नपाएको गुनासो निर्माताहरूको छ भने अझै कतिपय चलचित्रको इ–टिकटिङ् हुन सकेको छैन । चलचित्र विकास बोर्डले सूचना नै जारी गरेर इ–टिकटिङ गर्न आह्वान गरेपछि अलमल देखिएको हो ।
बक्स अफिस सञ्चालनमा आएसँगै सार्वजनिक चलचित्रको निर्माण पक्षले ‘यति कमायो’ भन्ने दाबी कम भएको थियो । तर, केही समय यता पुनः चलचित्रको यति र उति कारोबार भयो भनेर सार्वजनिकरुपमा दाबी हुन थालेको छ । बक्स अफिसले कारोबारलाई तत्कालै पारदर्शी रूपमा देखाउन सक्नुपर्ने हो र त्यसका लागि दाबीको भर नपर्नु पर्ने हो ।
सङ्कलित रकमबारे जानकारी चलचित्र निर्माण पक्ष वा वितरकले दिएको जानकारीका आधारमा सार्वजनिक गरिन्छ । बक्स अफिस सञ्चालक अर्थात् चलचित्र विकास बोर्डले भने सङ्कलित रकम सार्वजनिक गर्ने अनुमति नभएको दाबी गरेको गोरखापत्रमा खबर छ ।
चलचित्र ’छक्का पञ्जा ३’ ले बक्स अफिसमा आफ्नै पहिलो संस्करणको ‘रेकर्ड ब्रेक’ भएको खबर सार्वजनिक ग¥यो । कलाकार दीपकराज गिरी र निर्देशक दीपाश्री निरौलाले फेसबुकमार्फत चलचित्रले १७ दिनमा १६ करोड रुपियाँ कारोबार गरेको जानकारी दिनुभएको थियो । तर त्यसका आधिकारिकता भने पुष्टि हुन सकेको छैन । बक्स अफिसले त्यसबारे जानकारी दिएको छैन ।
बक्स र अफिस अलग !
चलचित्र छक्का पञ्जा ३ का निर्माता गिरी बक्स अफिसको काम कारवाहीबाट सन्तुष्ट देखिनुहुन्न । उहाँ भन्नुहुन्छ– एकातिर ‘बक्स’ र अर्कातिर ‘अफिस’ छ । छक्का पञ्जा ३ ले ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेको दाबी गर्दै उहाँ थप्नुहुन्छ,‘तर त्यसका जानकारी पाउन सकिएको छैन ।’
गएको साउन १ गतेदेखि बक्स अफिस कार्यान्वयनमा आएको हो । चार महिना बितिसक्दा पनि सही उपयोग नभएको गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘बक्स अफिसले त ‘लाइभ’ तथ्याङ्क दिनुपर्ने थियो तर खै ?’ उहाँले छक्का पञ्जा ३ को अहिले दुई वटा शो मात्र रहेको जानकारी दिदै चलचित्रलाई दर्शकले माया गरेको तर त्यही कुरा कारोबारका आधारमा सार्वजनिक हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
चङ्गा चेट पनि उस्तै
यता चलचित्र चङ्गा चेटको निर्माता तथा वितरक माधव वाग्ले भने आफूलाई बक्स अफिसमार्फत कुनै पनि दिनको कारोबार तथ्याङ्क नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘ सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिन पनि हामीलाई दैनिक तथ्याङ्क त आउनुपर्‍यो नि ?’, उहाँले निर्माण गर्नुभएको चलचित्र ’चङ्गा चेट’ कात्तिक १६ गतेदेखि प्रदर्शन भइरहेको छ । तर, दुई साता बित्दा पनि कारोबार रकम जानकारीमा नआएको भन्दै उहाँआक्रोश पोख्नुहुन्छ,‘मैले बक्स अफिसको लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरिसके तर मलाई ‘तथ्याङक’ भने अहिलेसम्म पनि पठाएको छैन ।’
अमेरिकाले भूमध्यसागरमा बमवर्षक विमान पठायो
जापानीले किन किन्दैनन् अमेरिकी कार?
काठमाडौँ: खानेपानीमन्त्री बीना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर सरकार कानूनीरुपमा कहीँ कतै पनि नचुकेको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले इटलीको सिएमसीसँग ठेक्का ...
12th Mar 2019 पिएसजे न्युज
काठमाडौ : विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ, एक हजार जनसंख्या बराबर कम्तीमा एक डाक्टर हुनुपर्छ। तर, नेपालमा १४ सय सय सरकारीसहित जम्मा ४४ सय डाक्टर छन्। यो हिसाबले एक डाक्टरले ६ हजार ...
काठमाडौँ: सरकारी अस्पातलले किनेका र अनुदानमा पाएका कतिपय महँगा उपकरण प्रयोग भएका छैनन् । बिग्रिएका उपकरण बनाइएको छैन भने कतिपय नयाँ उपकरण जडानसमेत नभएकाले खिया लागेका छन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ...